Chances of having twins အမြွာကိုယ်ဝန်လိုချင်သလား – Mawlamyine Daily
မော်လမြိုင်၊ ၁၁ ဇန်နဝါရီ ၂၀၁၉
သမီးအသက် 26 နှစ်ပါ အိမ်ထောင်ရှိ။ သားလေးနှစ်ယောက်ရပါပြီ အကြီးဆုံးက 8 နှစ် အငယ်က5နှစ် အခုကိုယ်ဝန်2လရှိပါပြီ အမွှာပူးလိုချင်လို့ပါဆရာ ဘာဆေးသောက်ရင် အမွှာပူးရနိုင်မလဲဆရာ တချက်လောက် ပြောပြပေးပါနော် အမျိုးသားရဲ့အကိုက အမွှာပူးမွေးဖူးတယ် အမျိုးသားရဲ့မောင်နှမ ဝမ်းကွဲတွေကလဲ အမွှာပူးမွေးဖူးတယ် အဲဒါလေး တချက်လောက် ပြောပြပေးပါလားဆရာ ဆရာတင်ထားတဲ့ပိုစ့်တွေမှာ တွေ့တော့တွေ့ပါတယ်ဆရာ ဒါပေမဲ့ အင်္ဂလိပ်လိုက ရေးထားတာများတော့ သမီးနားမလည်လို့ပါ ဖြစ်နိုင်ရင် ဘယ်ဆေးသောက်ရင် ပိုရဖို့လွယ်လဲဆိုတာလေးကို တမျိုးထဲ ပြောပြပေးပါလားဆရာ
မေးခွန်းကိုဖတ်ပြီး တင်ထားတာကို ပြန်ဖတ်ရတယ်။ အင်္ဂလိပ်လိုတွေပါနေတာက ဘာတွေလဲ။ ဆေးအမည်နဲ့ အမြွာရအောင်လုပ်နည်းအမည်တွေသာဖြစ်ပါတယ်။ အဲတာတွေကို ဗမာလိုရေးလို့ မဖြစ်နိုင်။ ဆေးစာတွေကို ဘာသာပြန်တာက တယောက်တမျိုး။
အမြွာကိုယ်ဝန်က အသက်ပိုကြီးသူတွေမှာ အရများတယ်။ သွေးမဆုံးခင်မှာ အီစထိုဂျင်အပြောင်းအလဲကြောင့်လားလို့ မှန်းဆရတယ်။ အသက် ၃၅ နှစ်ကျော်သူတွေမှာ အမြွာကလေးရတာပိုတယ်။ အဲဒီအချက်က သွင်တူအမြွာမဟုတ်ာမှာသာ မှန်းဆတယ်။ အမြွာမွေးမိသားစုရာဇဝင်ရှိသူတွေမှာ အမြွာကလေးရဖို့အခွင့်အလမ်းများတယ်။ သားဦးထက် နောက်ကလေးမှာ အမြွာပိုဖြစ်တာတွေ့ရတယ်။ မိသားစုကြီးတာတွေမှာလည်း ပိုတွေ့ရတယ်။ တားဆေးသောက်နေရင် ကိုယ်ဝန်ရသူတွေမှာလည်း အမြွာရလမ်းပိုတာတွေ့ရတယ်။ တားဆေးဖြတ်ဖြတ်ချင်း ကိုယ်ဝန်ရသူတွေမှာလည်း ပိုရတတ်တယ်။ ကိုယ်ခန္ဓာကြီးသူတွေမှာ အမြွာရတာပိုများတယ်။ အရပ်ရှည်အမျိုးသမီးတွေက မရှည်သူတွေထက် အမြွာရလမ်းများတယ်။ ဖေါလစ်အက်စစ်ကို ကိုယ်ဝန်မမယူခင်ကတည်းကသောက်တာ ပိုတယ်။ ကမာ (မုတ်) စားခိုင်တယ်။ သွပ်ဓါတ်ကိုခင်ပွန်းကိုသောက်စေတယ်။ ကစွန်းဥလို့ပြောတာလည်းရှိတယ်။ အရင်မွေးထားပြီး ကလေးကို နို့ဆက်တိုက်နေသူတွေမှာ ပိုရတတ်တယ်။ ဒါတွေ တိတိကျကျပြောတာမဟုတ်ပါ။
1. သုတေသနတွေအရ အသက် ၃၅ နှစ်ကျော်မှကိုယ်ဝန်ဆောင်သူတွေမှာ အမြွာကိုယ်ဝန်ဖြစ်တာပိုများကြတယ်။ အဲတာကလည်း သွင်တူအမြွာမဟုတ်ကြပါ။
2. IVF ကလေးရအောင်လုပ်နည်း နဲ့ Clomid မျိုးဥဆေးသုံးကြသူတွေမှာ အမြွာရဘို့များကြတယ်။ မျိုးဥအပိုထွက်လို့ ဖြစ်တယ်။ ၂ဝ-၄ဝ % အမြွာရတယ်။
3. ကိုယ်ဝန်တားဆေးသုံးသူတွေက မသုံးသူတွေထက်ပိုပြီး အမြွာရကြတယ်။ တားဆေးဖြတ်ပြီး အမြွာရလာတတ်တာကို ပြောတာဖြစ်ပါတယ်။
4. အရင်ကအမြွာရဘူးသူလည်း နောက်ထပ်ရစရာအခွင့်အလမ်းပိုကြတယ်။
5. BMI လူဝသူတွေမှာ အမြွာပိုရကြတယ်။
6. အရပ်ရှည်သူတွေမှာ အမြွာပိုရကြတယ်။
7. Folic acid ဖေါလစ်အက်စစ်သောက်ပါ။
8. ခင်ပွန်းက Oysters ပင်လယ်စာစားပါ။ ဇင့် (သွပ်) ဓါတ်ပါလို့ကောင်းတယ်။
9. ကိုယ်တိုင်က အမြွာမွေးသူဆိုရင် ကိုယ့်ကလေးလည်း အမြွာဖြစ်လာတတ်တယ်။
10. မိခင်လောင်းက ကစွန်းဥစားပါ။
11. အရင်မွေးပြီးကလေးကို နို့ကြာကြာတိုက်ပါ။
12. အသား၊ ငါး၊ နို့အစားအသောက်တွေစားပါ။
ဒီနည်းလမ်းတွေက အမြွာရလမ်းပိုများစေမယ်ပြောတာသာဖြစ်တယ်။ အထောက်အကူသာရမယ်။ IVF နည်းကလွဲရင် သိပ္ပံနည်းကျမဟုတ်ပါ။
IVF နည်းနဲ့ ကိုယ်ဝန်ရအောင်လုပ်ရာမှာ မျိုးဥထွက်ဆေးတွေသုံးရတယ်။ မျိုးဥတခုမက ထွက်စေနိုင်လို့ အမြွာရနိုင်တယ်။ အမျိုးသမီးသုံးမျိုးပွါးအားပေးဆေးတွေဆိုတာ (၁) Clomiphene ဆေးကနေ မျိုးဥထွက်စေမယ်။ ဦးနှောက်ကထွက်တဲ့ ဟော်မုန်းကို လှုံ့ဆော်ပေးလို့ဖြစ်တယ်။ (၂) Gonadotropins ဆေးကနေလည်း မျိုးဥထွက်စေမယ်။ မျိုးဥအိမ်ကို တိုက်ရိုက်သက်ရောက်လို့ဖြစ်တယ်။
IUI နည်းနဲ့ IVF နည်းတွေမှာ အဲဒီဆေး ၂ မျိုးတွဲသုံးရတယ်။ အမျိုးသမီးတဦးချင်းအပေါ်မှာမူတည်တယ်။ PCOS မျိုးဥအိမ်မှာ ရေအိတ်အများ ရှိနေသူတွေက Clomiphene ဆေး ပေးတာကောင်းတယ်။ Metformin ပေးရမဲ့သူဆိုရင်မရဘူး။ တချို့ကြ Metformin နဲ့ Clomiphene ၂ မျိုးလုံးပေးရတယ်။ Hyperprolactinemia နို့ထွက်ဟ်ာမုန်းများတဲ့အမျိုးသမီးဆိုရင် Bromocriptine or Cabergoline ဆေးပေးမှ မျိုဥထွက်တယ်။
မျိုးဥထွက်ဆေး Clomiphene ပေးရင် အမြွာကိုယ်ဝန်ရလမ်းပိုစေတယ်။ ၁ဝ% မှာ အမြွာရတယ်လို့ တွေ့လာရတယ်။ Clomiphene ဆေးကို Clomid, Serophene, C -Hop 50, Cee Cee Clofert, Clofert, Clofert (100 mg), Clofert (50 mg), Clomate -50, Clome, Clomidac, Clominova -25, Clomiprop, Clomiriv – 25, Clomitrop, Clophene, Clopreg, Dutchcom နာမည်တွေနဲ့ ရောင်းတယ်။
Gonadotropins ဆေးပေးသူတွေထဲက ၃ဝ% မှာ အမြွာရတယ်လို့ တွေ့လာရတယ်။ Gonadotropins ဆေးကို Repronex, Menopur, Bravelle, Follistim, Gonal-F နာမည်တွေနဲ့ရောင်းတယ်။